Biyyaa orma taankiirra bahani qabatun ni dandayaama taankiirra taa’anii bulchuun garuu waan hin dandayaamne | Oromia Shall be Free
Samora Yunis, is one of TPLF leaders and a Chief of Staff of the Ethiopian National Defence Forces. According to Human Rights Watch, credible sources identify General Samora as a member of the leadership group which met in Jijiga following the attack on oilmen at Abole on 24 April 2007, to determine an appropriate response to this raid. Basically, he committed genocide in Ogaden
bilisummaa April 24, 2016	Comments Off on Biyyaa orma taankiirra bahani qabatun ni dandayaama taankiirra taa’anii bulchuun garuu waan hin dandayaamne
Aboy! “jechuun Tigree biratti waan guddaadha. Abuunaa siyaasaa (Political Patriarch ) Wayyaanee Sibhat Naggaa alaabaa Oromoo fi kan Masrii qabatee baqataa Oromoo Kaayrootti hiriira bahe Masri fi ABO tu duubaan jira jechuun hamma sirni Wayyaanee fi Aboy dullooman caalaa, muddamsuun TPLF dheefa bira akka gaye mirkaneessa. Azeeb Masfin mal akka jette nu yaadachiisa. “Qabeenyma fi nagaa fira kootu nayaachisaa jira” jechuun dheefa malee homaa hin hafneedha.
Akkuma ilma namaa hundaa mootummaa kufaa jiru machiin du’aa akkam akka gootu mootummaa Haylasillaasee 1974 yaroo barattootaan marfame dhagenyee turre, dhuma sirna Dargii Mangistuu hamma macheessites arginnee jirra! Sirna Wayyaanee Oromoon hamma raaseef! Hammam akka isaan ganetti waan beekaniif hammanatti Oromoon nutti dammaqaa beekuuf eeguu dhabuun hilleensa dugda naachaa irra rafte isaan taasisaa jira!
Mootummaa Ameerikaa dhaamsa mootummaa Israaelii bara 1948 erge keessatti ” Palestine biyya ummata rafuu isinitti kennine! Hamma rafee turus hin beeknu! Gaafa hirriibaa dammaqe waan inni isin godhuufis nuttii itti gaafatama hinqabnu jedhanin turran! ” Akkasuma kan ardha Wayyaanne jarjarri fi muddamsuun warraaqsi ummta Oromoo Wayyaaneetti buuse ummanni Oromoo akka hin rafiniif qawwee malee uleenis fardaa miilaan itti guulee akka isaan injifatu ragaa tahaa jira.
Kanaan boodaa abbaan dhimmaa ummata Oromoo tahee kallachi bilisummaa Oromoo Qeerroo tahuu caalaa waan qeerroon keessa ooletti rafnee ka’uuf deemna! Abbaan biyyaa Oromoo waan taheef bilisa baaftota ufii uf keessaa fiduu dandaya, dandayesi! Gita bittoota Wayyaanees ufirraa buqqisuu dandaya, eegalesi! Akka makmaaysa Chaaynotaa “Biyya Ormaa taankiirra bahanii qabatuun ni dandayama! Taankiirra ta’anii bulchuun waan hindandayamneef dhugaa kana waan beekanif isaanis karaa hundanu sochii godhaa jiru. Eega Oromoo murtiin inni qabu tokko waan tahef sochii amma biyyaa keessa finnina jiru kana humna afaan qawweettin deegarun FXG kana gama milkiiti yaroo dhiihesinu amma jedha .
Previous OMN: Hiriira Hawaasa Oromoo Ameerikaa Kaabaa DC Kutaa 2ffaa
Next Rains wreak havoc in drought-hit Ethiopia